CPlus for Craigslist - Officially Licensed 2.1.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား လူေနမႈပံုစံ CPlus for Craigslist - Officially Licensed
CPlus for Craigslist - Officially Licensed ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Searching for daily classifieds, job ads, yard sales, garage sales, car sales or dating ads? CPlus for Craigslist is exactly what you need. Not only can you search for all types of classified ads but you can also search multiple cities atatime from your mobile. You can customize your profile by marking your favorite ads and postings. Posting to sell can never be so easy.
CPlus makes Craigslist easier to use. There areaton of added features to make browsing, searching and posting on Craigslist, smooth, effective and it is absolutely free.
## Awesome App, Amazing Features ##
- Geo-location enables you to automatically find nearby cities.
- Multiple city search for ads and classifieds.
- Multiple display modes for Search Results: Photo+description view, photo grid view, photo album view, map view and big photo view.
- Searches can be saved to start screen and avoid repetition of same searches.
- Postings can be saved to your favorite list. Also Add notes to your favorite postings.
- Update search in the result page including category, filter and sorting.
- Native in-app posting for creating new ads and classifieds to buy, sell, rent products and services.
- Renew, edit or repost your ads and manage multiple accounts from your iPhone.
- Great mobile optimization for easy readability and functionality.
CPlus for Craigslist isaFree to use app! Stay tuned to get updates and constant improvements and new features from us, regularly.
Let us know your valuable feedback at yanflex@gmail.com or show us your support by rating us.
ကျွောငွာ, အလုပ်ကြော်ငြာတွေ, ခြံအရောင်း, ကားဂိုဒေါင်ရောင်းအားကားအရောင်းသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ကြော်ငြာတွေနေ့စဉ်ရှာဖွေနေသည်? Craigslist များအတွက် CPlus သင်လိုအပ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျလျှို့ဝှက်ကြော်ငြာတွေအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်သင်မူကားလည်းသင့်မိုဘိုင်းကနေအချိန်ကမျိုးစုံမြို့ကြီးများရှာဖွေနိုင်ပါတယ်မသာ။ သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကြော်ငြာတွေနဲ့တင် marking ဖြင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရောင်းဖို့ပို့စ်တင်ဒါလွယ်ကူသောဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။
CPlus သုံးစွဲဖို့ Craigslist ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဲဒီမှာထိရောက်သောချောမွေ့ Craigslist အပေါ် browsing အတွက်, ရှာခြင်းနှင့်ပို့စ်အောင်ကဆက်ပြောသည် features တွေ, တစ်တစ်တန်ဖြစ်ကြပြီးကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
## Awesome ကို App ကို, Amazing အင်္ဂါရပ်များ ##
ဓာတ်ပုံ + ဖော်ပြချက်မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံကိုဇယားကွက်မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်အမြင်, မြေပုံအမြင်နှင့်ကြီးမားသောဓာတ်ပုံကိုအမြင်: - Search Results များအတွက်အကွိမျမြားစှာ display ကို Modes သာ။
- post သင်အကြိုက်ဆုံး list ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်အကြိုက်ဆုံးပို့စ်မှတ်စုများထည့်ပါ။
- အမျိုးအစား, filter ကိုနှင့်စုစည်းခြင်းအပါအဝင်ရလဒ်စာမျက်နှာများတွင် Update ကိုရှာဖှေ။
- ငှားထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ရောင်းဝယ်အသစ်ကြော်ငြာတွေနဲ့ကျွောငွာအတွက် Native In-app ကိုတင်ခြင်း။
- သက်တမ်းတိုးရန်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်သင့်ကြော်ငြာတွေ repost နှင့်သင့် iPhone မှမျိုးစုံအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။
- လွယ်ကူသောဖတ်နိုင်တဲ့နှင့် function များအတွက်ဂရိတ်မိုဘိုင်း optimization ။
Craigslist များအတွက် CPlus app ကိုသုံးမယ့်အခမဲ့ပါ! မှန်မှန်, ကျွန်တော်တို့ဆီကနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အသစ် features တွေရဖို့ဖမ်းယူနားဆင်နေပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို yanflex@gmail.com မှာသင့်ရဲ့အဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်ကိုသိသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကို rating ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပြသကြပါစို့။
CPlus for Craigslist - Officially Licensed အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
CPlus for Craigslist - Officially Licensed အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
CPlus for Craigslist - Officially Licensed အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
CPlus for Craigslist - Officially Licensed အား အခ်က္ျပပါ
junior512 စတိုး 1 351
CPlus for Craigslist - Officially Licensed ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း CPlus for Craigslist - Officially Licensed အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://yanflex.com/Craigslistplus/privacypolicy.html
App Name: CPlus for Craigslist - Officially Licensed
Release date: 2019-07-24 14:55:12
လက်မှတ် SHA1: BB:14:94:4B:06:6E:35:2A:1E:8F:C4:E1:39:DA:B5:3D:A0:20:1D:12
CPlus for Craigslist - Officially Licensed APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ